क्रिकेट सिध्याउने राजनीति
अस्ट्रेलियाविरूद्ध खेलमा डेनिस राजपरिवार कसको समर्थक?
इरानको दुर्भाग्य, कोस्टाले फेरि उकासे स्पेनलाई
रोनाल्डो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने इतिहासतर्फ
सुआरेजको सयौं खेलमा जितको उपहार, साउदी बाहिरियो
रोनाल्डोले लिए ३२ वर्ष अगाडिको बदला, मोरक्को प्रतियोगिताबाट बाहिर
विश्वकप रोचक कहानीः जसलाई प्रायोजकको जर्सी लगाउन प्रतिबन्ध छ
शोधनान्तर घाटा: नरोकी सुख छैन
डिएगो कोस्टा (स्पेन)
अलिरेजा जाहान्बाकास (इरान)
राजपाको महाधिवेशन २०७६ वैशाखमा
मोरक्कोको चिन्ता रोनाल्डो, पोर्चुगल ३२ वर्षको बदला लिने तयारीमा
स्विफ्टको नयाँ मोडल सार्वजनिक
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका शर्त
मौद्रिक नीतिले हटाउला ब्याजदरको विकृति
चीनसँग आठ परियोजना निर्माणको सम्झौता
आज दुई एशियाली राष्ट्र इरान र साउदीको अग्नि-परीक्षा
रिपोर्टआइतवार, फाल्गुण २९, २०७३
२८ फागनुमा त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको नेपाल र केन्याको खेल हेर्न उपस्थित दर्शक । तस्वीर: रासस
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो भने यतिबेला काठमाडौंमा नयाँ ‘दुईदिवसीय राष्ट्रिय लिग’ चलिरहेको हुन्थ्यो । दुईमहीने क्षेत्रीय प्रतियोगिताहरूबाट छनोट भएका खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोलीसँगै दुईदिवसीय लिगमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्थे । तर दुईदिवसीय लिग त परै जाओस्, दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय लिगसमेत अवरुद्ध छ ।
२०७१ मा कीर्तिपुरस्थित त्रिवि खेल मैदानमा भएको एकदिवसीय राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता नै पछिल्लो लिग हो । १ चैत २०७१ मा भएको उक्त लिगमा नेपाल आर्मी क्लब च्याम्पियन बनेको थियो । १४ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष क्यानले आयोजना गरिरहेको राष्ट्रिय लिग त्यसयता हुनसकेको छैन ।
एकदिवसीय मात्र होेइन, टी–२० राष्ट्रिय लिग नभएको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । पुरुष मात्रै होइन, महिला क्रिकेटरका लागि पनि यी दुवै लिग हुनसकेका छैनन् ।
“दुई वर्षदेखि लिग भएको छैन, जसले गर्दा खेलाडीहरू खुम्चिनु परिरहेको छ”, आईसीसीद्वारा निलम्बित क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन् । क्यान निलम्बित हुँदाको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले नै लिग आयोजना गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, सरकार र राखेप टुलुटुलु हेरिरहेका छन्, यसको मार खेलाडीमा परेको छ ।”
राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्रै होइन, गएको दुई वर्षमा क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता पनि बन्द छन् । क्यानले प्रत्येक वर्ष नौ वटा क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रतियोगिता गर्दै आएको थियो । क्षेत्रीय प्रतियोगिता अघि जिल्ला प्रतियोगिताहरू पनि गरिन्थ्यो । विद्यालयस्तरीय प्रतियोगिता पनि हुन्थे । १६ वर्षमुनिको यू–१६ र १९ वर्षमुनिको यू–१९ का जिल्ला, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि ठप्प छन् ।
बाँके जिल्लास्थित क्यानका अध्यक्ष सञ्जयदत्त सिंह जिल्ला र विद्यालयस्तरीय लिग नहुँदा स्थानीय क्रिकेट ओरालो लागिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन, “घरेलु लिग नहुनु सामान्य कुरा हुँदै होइन, यसले बन्दै गरेको क्रिकेटको माहोल बिगारिरहेको छ ।”
‘ब्याकअप’ नै छैन
घरेलु लिग प्रतियोगिता नहुँदा नयाँ खेलाडी आउने बाटो नै बन्द भएको छ । “पुराना ४०÷४५ जना खेलाडीबाटै राष्ट्रिय टोली बनिरहेको छ, ‘ब्याकअप’ नै छैन”, चन्द भन्छन् । उमेर समूहको राष्ट्रिय टोलीमा पनि नयाँ अनुहार कमै देखिएको उनी बताउँछन् ।
आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत केन्यासँगको खेलका लागि प्रारम्भमा ५२ खेलाडी छनोट गरिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश पुरानै थिए भने केहीलाई एक वर्षको अवधिमा विभिन्न क्लब तथा एकेडेमीद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनलाई आधार मानिएको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक जगत टमटा बताउँछन् । “लिग नहुँदा खेलाडी छान्न अरु प्रतियोगिताको भर पर्नुप¥यो, तर, केही नयाँ खेलाडी पनि परेका छन्”, उनी भन्छन् । राष्ट्रिय टोलीको अन्तिम १४ जनाभित्र पहिलोपटक पर्न सफल आसिफ शेख र दीपेन्द्रसिंह ऐरी पनि यू–१९ राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी हुन् ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान विनोद दास लिगलगायतका प्रतियोगिता नहुँदा खेलाडी निखारिने अवसर नपाएको बताउँछन् । “नयाँ खेलाडी आउने मूलबाटो नै यही हो”, उनी भन्छन् ।
झापा, क्यानका सचिव मनोज कटुवाल घरेलु लिग नभएका कारण टीममा नयाँ खेलाडी नपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन, “यस्तो बेला खेल क्षमताभन्दा पनि व्यक्तिगत चिनजान प्राथमिकतामा पर्छ ।”
शरद भेषवाकर र ज्ञानेन्द्र मल्ल ।
नेपाली क्रिकेटको ओरालो यात्रालाई पछिल्लो पटक राजनीतिक रंग दिने काम भने तत्कालीन राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाले गरे । ९ कात्तिक, २०६९ मा लामाले क्यानका अध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई हटाउँदै माओवादीका केन्द्रीय सदस्य टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरे । पुसमा भएको अधिवेशनबाट आङबुहाङ आफैं अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
२५ जेठ, २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्यान अध्यक्ष आङबुहाङसहित १० जना पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता ग¥यो । २० असोज, २०७१ मा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विनयराज पाण्डेको नेतृत्वमा श्रीहर्ष कोइराला उपाध्यक्ष र रमेशकुमार सिलवाल महासचिव बनाई क्यानको नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरे । त्यसविरुद्ध आङबुहाङ नेतृत्वको क्यान सर्वोच्च अदालत पुग्यो । ९ मंसीरमा आङबुहाङ नेतृत्वकै समितिलाई काम गर्नु दिनु भनी सर्वोच्चले आदेश दियो । यसैबीच २० कात्तिक, २०७२ मा विशेष अदालतको इजलासले आङबुहाङ नेतृत्वको क्यान पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दियो ।
आङबुहाङको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि २९ मंसीर, २०७२ मा क्यानको साधारणसभाले चतुरबहादुर चन्दलाई नयाँ अध्यक्ष चयन ग¥यो । तर, यो साधारणसभालाई राखेपले मान्यता दिएन ।
राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले २४ पुसमा रमेश सिलवालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय क्यानको तदर्थ समिति गठन गरे । त्यस विरुद्ध चन्दले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, जसको फैसला हुन बाँकी छ । नेपाली क्रिकेटमा भइरहेको राजनीतीकरणबारे जानकार आईसीसीले गत १३ वैशाखमा क्यान निलम्बनको निर्णय ग¥यो । नेपाली क्रिकेट विकासमा यो ठूलो दुर्घटना थियो ।
१९ जुलाई, २०१६ लर्डसमा एमसीसीविरुद्ध जित हात पारेपछि सामुहिक तस्वीर खिचाउदै नेपाली टोली । तस्वीरः प्रदिप सिंह
क्यान निलम्बनसँगै देशभित्रका सम्पूर्ण गतिविधि एकाएक रोकिन पुगे । तर, यति हुँदाहुँदै पनि आशा भने जीवित छ । “व्यवस्थापन सुधार्ने हो भने अझै राम्रो गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ”, नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान विनोद दास भन्छन् । सन् २०१९ मा हुने विश्वकप खेल्ने लक्ष्य बनाएको नेपालले त्यसैको छनोटका लागि आगामी वर्ष बाङ्लादेशमा हुने वल्र्डकप क्वालिफायर खेल्ने उद्देश्यका साथ अहिले आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलिरहेको छ ।
प्रशिक्षक टमटा क्यानको निलम्बनबारे कानूनी टुंगो लागेसँगै नेपाली क्रिकेटले गति लिने आशा व्यक्त गर्छन् । “निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन” उनी भन्छन्, “क्यानको निलम्बनबारे अदालतको फैसलासँगै एकदिवसीय र दुईदिवसीय लिग चाँडै सञ्चालन भए राम्रो गर्न सकिने ठाउँ छ ।”
निलम्बित क्यान अध्यक्ष चन्द लिगहरू सञ्चालन र क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्न राखेप र सरकारले ध्यान नदिएको बताउँछन् ।
राखेप सदस्यसचिव विष्ट क्यानले आयोजना गर्दै आएका लिग प्रतियोगिता नगरे पनि अन्य प्रतियोगिता गरिरहेको बताउँछन् । “छिट्टै राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्छौं, दुईदिवसीय लिग प्रतियोगिताको पनि तयारीमा छौं”, उनी भन्छन् ।
बिहिवार, आषाढ ७, २०७५ अस्ट्रेलियाविरूद्ध खेलमा डेनिस राजपरिवार कसको समर्थक?
बिहिवार, आषाढ ७, २०७५ इरानको दुर्भाग्य, कोस्टाले फेरि उकासे स्पेनलाई
बुधवार, आषाढ ६, २०७५ रोनाल्डो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने इतिहासतर्फ
बुधवार, आषाढ ६, २०७५ सुआरेजको सयौं खेलमा जितको उपहार, साउदी बाहिरियो
टिप्पणी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका शर्त
रिपोर्ट मौद्रिक नीतिले हटाउला ब्याजदरको विकृति